सुन र नगद लिएर आफ्नै भतिजसँग टाप कसेपछि...! | Kendrabindu Nepal Online News
सुन र नगद लिएर आफ्नै भतिजसँग टाप कसेपछि…!
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०७:४३
बढ्दो बेरोजगारी र बैदेशिक रोजगारीले दम्पतीहरुका बीचमा सम्बन्ध विच्छेद बढेको पाइन्छ । यसले गर्दा नेपाली समाजमा अनेक खालका घटनाहरु घटिरहन्छन् । यसै क्रममा बझाङका एक युवकले सुन र नगदसहित आफ्नै काकी नाता पर्ने महिलालाई भगाएका छन् ।
आफ्नै भतिजसँग, टाप कसेपछि...!, सुन र नगद लिएर
Prevबर्दियामा डेंगुबाट एक जनाको मृत्यु
हालसम्म डेंगु संक्रमणका कारण देशभरमा सात जनाको मृत्युNext